~ ဏီလင်းညို ~: မရည်ရွယ်သော်လည်း....
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 3:33 AM
နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားနဲက လူတွေ လောကကြီးကို အလှဆင်နိုင်ပါစေ
မရည်ရွယ်ပဲလုပ်လိုက်တဲ့ အပြုအမူလေးတစ်ခုနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်လိုက်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုမှာ ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေ.. ခံရသူဘက်ကတော့ နာကျင်ရမှာပါ။
မတွေ့ရတာကြာပေမယ့် သတိရလျက်ပါနော် ကိုဏီလင်း။
ခြင်လေးတစ်ကောင် သူ့ကိုက်မိတာ စာဖွဲ့စရာ ဖြစ်သွားရှာပြီ.. စာရေးတတ်သူတွေများနော်..
ဟုတ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ မရည်ရွယ်ဘဲ နှောက်ယှက်မိတာ ရှိသလို တမင်ရည်ရွယ်ပြီး နှောက်ယှက်တာလည်း ရှိကြတယ်
မတော်တဆ ဖြစ်တာကတော့ ထားပါတော့ တမင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ နှောက်ယှက်တာမျိုးကတော့ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ.
ဘိုင်းဒဝေး word verification ဖြုတ်လိုက်ရင် spam တွေ တအားလာသကွဲ့...
ပြီးခဲ့တဲ့ လက ကျုပ်ဘလော့လေး Black list တောင် ဖြစ်သွားရရှာတယ်လေ..
အဆုံးသတ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာ လေးနက်စွာ တွေးမိလိုက်တယ်..
ကိုဏီ ရေ.. ခုလို လေးလည်း ပေါ်လာပါဦးနော်..
ရေးမယ့်ရေးတော့လည်း တွေးစရာလေးပါ ရအောင်ပေးသွားတယ်..။
ခြင်အကြောင်းရေးတာ အမျိုးမျိုးဖတ်ဘူးတယ်။ ဒီလိုအတွေးမျိုးနဲ့ ရေးတာတော့ မဟုတ်။
ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်ဆိုတာလည်း အမြဲသတိထားနေတဲ့ကြားက တစ်ခါတစ်ခါ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ လွတ်ထွက်သွားတတ်တာမျိုးလား..??
အဲ့သလိုမျိုးလေးတွေ မကြာ မကြာရေးတင်ပါ..။ ဥပေက္ခာကြီး မလုပ်ပါနဲ့ဦး....လို့..။
အွန်လိုင်းမှာ ပြန်မြင်ရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ် ကိုဏီလင်းညိုရေး) ပြုံးလည်းပြုံးရသလို လေးလည်းလေးနက်တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ...
ဟိဟိ ရယ်ရတယ်။ ကိုယ့်ကို နားပန်ပြန်ကျင်းမိတယ်ဆိုလို့။
မောင်လေးဏီလင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားဟာ ငါးပါးသီလရဲ့ အခြေခံပဲလေ....။ အဲသလို ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးသာ လူတိုင်းမှာ ရှိခဲ့ရင် လောကကြီး သိတ်နေပျော်မှာ....း)
ကျန်းမာလာပုံရလို့ ၀မ်းသာပါ၏း))))
အတွေးကောင်းတဲ့ စာတပုဒ်ထပ်တိုးဖတ်ရပြီ...ကျေးဇူးတင်ပါ၏ ဏီဏီ..။
ခြင်ထောင်ထဲ ခြင်တစ်ကောင် ဝင်နေရင်တော့ ကိုယ်လည်း သည်းမခံနိုင်ဘူး.. :D
လူဆိုတာလည်း ကိုယ့်ကို နှောက်ယှက်လာရင် သည်းခံနိုင်သူက ရှားသားလား..။
ကိုဏီ ခြင်တကောင်ကိုက်ရာကနေအတွေးများများရလိုက်တယ်ပေါ့..။ ဝတ္ထုရှည်တွေ ဘယ်နှစ်အုပ်ပြီးပလဲ..။ ဘယ်သူမေးနေတာလဲလို့ မှတ်မိလား..။
ဒီမှာလည်း ခြင်တွေပေါတယ်ဗျို့ ခြင်ကိုမရိုက်ဖြစ်တာ ကြာပေမဲ့လည်း သူတို့အော်သံကတော့ တကယ်ကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရပါတယ်
အစ်ကို့ အတွေးက စဉ်းစားစရာပါပဲ ...
ခုလို ပြန်ပေါ်လာလို့ ဘရို ကျန်းခန့်သာလို့ မာနေဆဲ (စိတ်) ပဲလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီနော် ...
တဝီဝီမြည်နေတာကို အမုန်းဆုံးပဲ..ခြေမှုန်းနိုင်ရင် အောင်နိုင်သူ အပြုံးနဲ့ ပေါ့..နောက်ဆုံးစာစုလေးကတော့ အတွေးလေး ရသွားတယ်..ကျန်းခန်းသာလို့မာပါစေ...
သြော် ကိုဏီ ကိုဏီ..
မချောပြောသလိုပဲ စာရေးကောင်းတဲ့သူမို့ အရေးနဲ့တင်မကဘူ အတွေးနဲ့ပါ အသိတရား ရစေတယ်... ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါအကိုရေ..